» भाइरल बनेपछि चियावाली सृस्टि तामाँग आमा भेट्न गईन ! माइतीघरमा चियावालीको स्वागत यसरी धुमधाम गरे परिवारले-(भिडियो हेर्नुहोस्) भाइरल बनेपछि चियावाली सृस्टि तामाँग आमा भेट्न गईन ! माइतीघरमा चियावालीको स्वागत यसरी धुमधाम गरे परिवारले-(भिडियो हेर्नुहोस्) – हाम्रो खबर
भाइरल बनेपछि चियावाली सृस्टि तामाँग आमा भेट्न गईन ! माइतीघरमा चियावालीको स्वागत यसरी धुमधाम गरे परिवारले-(भिडियो हेर्नुहोस्)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ । काठमाडौं, चैत । नेपाली यात्रुहरूले हवाईजहाजभित्रै मोबाइलमा कुराकानी र इन्टरनेट सेवा लिन पाउने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० हजार फिटमाथि उड्ने हवाइजहाजमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने निर्णय गरेपछि नेपाली यात्रुले विमानभित्रै मोबाइलमा कुराकानी र इन्टरनेट चलाउन पाउने भएका हुन् ।